Medjugorje: na-agwọ ọrịa site na ALS, na-akọwa mmetụta pụrụ iche ya gbasara ọrụ ebube
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 5, 2020 Ọktoba 5, 2020
Anyị chọrọ ịga dị ka ezinụlọ, dịkwa jụụ, n'enweghị atụ anya ihe ọ bụla site na njem a. Ọ bụ n’afọ okwukwe (...) ọrịa butere anyị nso okwukwe, mee ka anyị ghọta na ndụ bụ onyinye, ndụ mara mma.
Mmetụta ọnụnọ nke Chineke dị nso nyere anyị ike ịga n'ihu na ịlụ ọgụ.
Vicka bịakwutere, bikwasị m aka, makụrụ m. Agwara m ya - enwere m ọrịa AlS ma enwere m obi ụtọ - ma rịọ ya ka o kpee ekpere maka nwunye m na nwa m nwanyị.
Ahụrụ m ka mmiri si na isi ruo na mkpịsị ụkwụ…
Anyị ewereghị eserese maka ubochi, were mmụọ nke mmụọ…
Agụrụ m ozi ahụ ... dị ka ihe nlere nke ihe gaje ime ... O mechiri site n'ikwu na ndụ bụ onyinye, nke m biri kemgbe oge ọrịa m.
Anọrọ ebe ahụ, na-anakwere Sakrament a gọziri agọzi, ana m ekpekwa ekpere m, m kpere nwa nwoke ọzọ ekpere ... Anaghị m ajụ maka onwe m, mana enwere m oku a ka m rịgoro n’elu ugwu, lee ebe mụ na ya ga-agbago ugwu. Ka ọ dị ugbu a, ahụrụ m nkọwa a niile m nwere n’oge nkuchi ahụ, amaara m na m nwere ike ịga ugwu ahụ.
Agwara m Francesca - Echi anyị ga-aga ugwu - O kwuru - You na-arịa ọrịa nke isi ... Ọ metụrụ m ụkwụ, ụkwụ m kpọnwụrụ akpọnwụ ... Ọ bụ abalị mara mma na ebusoghị m akụkụ iku ume ... M na-eche chi ọbụbọ, ụbọchị ọhụrụ m nke ahụ dabara na ụbọchị ọhụụ.
Anyị erute n'ụtụtụ Tọzdee ... Anyị ji oche nkwagharị bịa rute n'ụkwụ ugwu ahụ. Etetara m ... Anyị bidoro ịrị ugwu a ... Enweghị m obi abụọ ọ bụla ... enwere m ahụ iru ala, mara mma, aka na-ama aza, naanị enwere m nsogbu iku ume, ugbu a ọ bụla na mgbe ahụ anyị kwụsịrị m zuru ike ntakịrị. Ndị ọzọ amaghị ihe na-eme anyị.
Anyị erutela elu. Ọbụna n’oge ahụ m na-agwa Madonnina - Madonnina mia, ị ka nọ n’oge, eweghị m iwe ...
Vicka gwara anyị ka anyị zuru ike ... echegbula ...
Anyị mere ule nyocha iji hụ mmebi akwara ma ha gwara m na enwere ọganihu dị ukwuu na-adịghị na usoro akwara neurovegetative dịka ALS. Ndị dọkịta enweghị ihe akaebe ọ bụla maka ihe mere. Ha jụrụ m ma a nyochala m ụdị ọgwụ ụzụ dị ka sel stem ... Anam a onlyụ ọgwụ ọria.
Aga m aga n’ihu ime ihe m mere ugbua, iji ike gbasie ike karịa na mbụ maka ikike ndị ọrịa ... M ga - aga n’ihu n’okwu nke okwukwe n’ihi na n’agbanyeghi na oria na - adighi nma dika ALS, inwe nso nso Chineke n’ebe m no - a na m agwa gi okwu banyere ahụmịhe m - anyị ji ike na okwukwe jisie ike oge niile.
Nke gara aga Post Gara aga post:Nsọpụrụ ụbọchị: kpachara anya ịbụ ndị mmehie
Next Post → Post ozo:Onyinye ebere nye Saint Faustina